တောင်ကိုရီးယားမှာ လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း မြင့်တက်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေက နိုဝင်ဘာလ မှာ သုံးနှစ်အတွင်း အနည်း ဆုံးနှုန်းနဲ့ ဆက်လက်တည်ရှိနေပေမဲ့ လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့ နှုန်းကသုညဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ပြီး ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တယ်လို့ ကိုရီး ယားစာရင်းဇယား (Statistics Korea) ရဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ချက် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆင့်မြင့် နည်းပညာတင်ပို့မှု ကန့်သတ်ချက်ကို လျှော့ချဖို့ အမေရိကန်ကို တရုတ်နိုင်ငံက တိုက်တွန်း
တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတင်ပို့မှု ကန့် သတ်ချက်ကို လျှော့ချဖို့နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို "ဈေးကွက်စီး ပွားရေး"(Market Economy) အဆင့်အဖြစ်အာမခံချက် ပေးဖို့ တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ရှီရှန်းက အမေရိကန် နိုင်ငံကို နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်က တိုက်တွန်းပြောကြားပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်ပြီးကျယ်ပြန့် တဲ့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ တရုတ် နိုင်ငံက အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက် တောင်ပိုင်း ချန်ဒူးပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးမှာ ဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အတွက် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မှန်မှန် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုက ကမ္ဘာကြီးကိုအပြုသဘောနဲ့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရေရှည်တည်တံ့ပြီးချိန်ခွင် လျှာညီမျှ တဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိ ကန် ပြည်ထောင်စုတို့က အတူတကွပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ သူကထပ်လောင်းပြောကြားပါ တယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဟာ စီးပွားရေးဆုတ်ကပ်ထဲကိုရေရှည်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့လည်း နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်ကသတိပေး ပါတယ်။ Source. rttnews.com
ယန်းငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်မှုကြောင့် "ဂျပန်ဖြစ်" တံဆိပ်တွေ အခက်တွေ့
အဆက်မပြတ်မြင့်တက်နေတဲ့ ဂျပန်ယန်းငွေကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ ဂယက်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို ပင်လယ်ရပ်ခြားရွှေ့ဖို့ စဉ်းစား လာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ တစ်စစများလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် '' Made in Japan" ဆိုတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေဟာ အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တစ်ဒေါ်လာကို ၇၆ ယန်းနှုန်းနဲ့ ယန်းငွေတန်ဖိုးဆက်ပြီးတည်တံ့နေမယ်ဆိုရင် ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက် စခန်းတွေကို နိုင်ငံခြားကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ သြဂုတ်လအတွင်းက ဝန်ကြီးဌာနစစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့တဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းက ပြောတယ်လို့ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက ဆိုပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ တစ်ဒေါ်လာကို ၇၇ ယန်းနှုန်းဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီး ယန်းငွေမြင့်တက်မှုကြောင့် ဂျပန် မော်တော်ကားလုပ်ငန်းပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်လို့ တိုယိုတာ ဒုတိယဥက္ကဌ ဆာတိုရှီအိုဇာဝါက လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က ပြောပါတယ်။ တိုယိုတာကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမနှစ်ထက်အမြတ်အစွန်း ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ ယန်းငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်တာလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာနဲ့ ဖလှယ်ရာမှာ တန်ဖိုးတစ် ယန်းမြင့်တက် တိုင်း တိုယိုတာရဲ့တစ်နှစ် အတွက် အမြတ်ငွေမှာယန်းငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ မတ်လမှာ ကုန်ဆုံးတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ တိုယိုတာကဂျပန်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တာက စုစုပေါင်း ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ရှိပြီး နီဆန် ထက်သာလွန်ပါတယ်။ တိုယိုတာနဲ့ အတူ အခြားဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဆိုနီ၊ မာဇဒါနဲ့ ကင်နွန်စတဲ့ကုမ္ပဏီကြီး တွေကလည်း ယန်းငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်မှုနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ ဂယက်ကြောင့်အမြတ်နှုန်းတွေ ကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန်ငွေကြေးတန်ဖိုးမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂျပန်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ပြည်ပမှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကျတဲ့အပြင် ပင်လယ်ရပ်ခြားကရရှိတဲ့ ဝင်ငွေတွေကို ဂျပန်ကုန်ပြန်လွှဲတဲ့အခါ တန်ဖိုးကျဆင်းတဲ့အတွက် နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေကလုပ်ငန်းတွေကို ပြည်ပရွှေဖို့ပြောလာကြတဲ့ အတွက် ဂျပန်စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ "အခွံချည်းပဲ" ကျန်မှာကိုစိုးရိမ်ကြောင်း ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ်ယူရှီဟိကိုနိုဒါက ပြောပါတယ်။ Souce.AFP
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်လုပ်ငန်းများ စတင်ဖို့ ဂူးဂဲအကြီးအကဲဆုံးဖြတ်
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်လုပ်ငန်းတွေထူထောင်ရာမှ အားပေး ကူညီဖို့နဲ့ ကမ္ဘာမှာလူသိအများဆုံး Search Engine ဖြစ်တဲ့ ယူကျုမှာ K-pop သီးသန့်ချန်နယ်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ ဂူးဂဲဥက္ကဌ အီရစ်ရှမစ်က ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ ဂူးဂဲအမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက် နေတဲ့ ရှမစ်က နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ လီ မြောင်ဘတ်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် ယခုလိုကတိပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတ ရုံးအရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနည်းပညာ ကုမ္ပဏီ တွေက အိုင်တီလောကစွမ်းအင်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် ဂူဂဲနဲ့ ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေက အနာဂတ်ကာလမှာလုပ်ငန်းကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးကအမြင်ချင်းတူညီကြပါတယ်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့ အင်တာနက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ထူထောင်ဖို့ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရကကြိုပမ်းဆောင် ရွက်နေသလို " Smart Society" လို့ခေါ်တဲ့ စမတ်ကျတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖြစ်လာစေမဲ့ စီမံ ကိန်းတွေကို တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ လီကပြောပါတယ်။ ဂူးဂဲကုမ္ပဏီနဲ့ တောင်ကိုရီးယား အီလက်ထရွန်းနစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စကို ဆွေးနွေးရအောင် ဂူးဂဲဥက္ကဋ္ဌက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို နှစ်ရက်ကြာလာရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စောစောပိုင်းကSK Telecom, KT Corp နဲ့ LG Uplus တို့နဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ Souce. koreaherald.com
ယူရိုဇုန်အကျပ်အတည်းအတွက် IMF အကြီးအကဲ တရုတ်ကိုသွားမည်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ အကြီး အကဲခရစ်စတင်းလာဂတ်က တရုတ်နိုင်ငံကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှာ သွားရောက်ပြီး ယူရိုဇုန်အကျပ်အတည်းနက်ရှိုင်း နေတဲ့ ကိစ္စကိုဆွေးနွေးပြီး ကယ်တင်မှုရန်ပုံငွေအတွက် တရုတ်နိုင်ငံဖြည့်ဆည်းနိုင်မဲ့ အခြေအနေကို ဆွေးနွေးမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ လာဂတ်က ပေကျင်းမြို့ကို သွား ရောက်တဲ့ နှစ်ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ပေကျင်းရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေး ဖိုရမ်မှာမိန့်ခွန်းပြောကြား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဘယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံမည်ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရ သေးပေမဲ့ ကယ်တင်မှု ရန်ပုံငွေဖြစ်တဲ့ European Financial Stability Facility ကို ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့ ယူရိုဇုန် ကြွေးမြီအကျပ်အတည်း ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကိစ္စကို ဆွေးနွေး မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားအရန် ငွေ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၂ ထရီလီယံရှိပြီး ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံခြား အရန် ငွေအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥရောပရန်ပုံငွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဥရောပခေါင်းဆောင် တွေက တရုတ်နိုင်ငံကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အကြီးအကဲ ကလော့စ်ရက်ဂလင်းကလည်း တရုတ်ပြည်ကို ရောက်လာပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ကထည့်ဝင်ရေး ကိစ္စကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒုက္ခတွေ့နေတဲ့ ယူရို ဇုန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီပေးဖို့ အတည်ပြုချက် မရှိသေးပါဘူး။ Souce. AFP
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့က တရုတ်အခပေး တီဗွီဈေးကွက်ကို မျက်စိကျ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ချန်နယ်လိုင်းများကို အခပေးအသုံးပြုမှု အရေအတွက်တိုးပွား လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတဲ့ အခပေး တီဗွီ ဈေးကွက်ထဲမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပါတယ်။ မီဒီယာပေါ်ထွန်းလာမှုက စားသုံးသူတွေရဲ့ ဝယ်လိုအားကို ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအလားအလာသစ်နဲ့အညီ TV လုပ်ငန်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလေ့လာ အကဲခတ်သူ တွေက ပြောပါတယ်။ အာရှကေဘယ်ကြိုးနဲ့ ဂြိုလ်တု အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအသင်း (CASBAA) ကကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ CASBAA ကွန်ဗင်းရှင်း နှစ်ပတ်လည်မှာ အခပေး တီဗွီနဲ့ ဗီဒီယို လုပ်ငန်းများ ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ဗင်းရှင်းမှာ ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက အခပေးအသုံးပြုသူ ၁၇၅ သန်းရှိပြီး ကမ္ဘာမှာ အကြီးမားဆုံးဈေးကွက်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ယခုနှစ်အတွက်ရောင်းချမှု ဟာဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရှိမယ်လို့ ဈေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့ SNL Kagan က ပြောပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရင် တရုတ်နိုင်ငံကဝင်ငွေအရ ဂျပန်နိုင်ငံကို ကျော်တက်ပြီး မာလ်တီချန်နယ်လိုင်းဈေးကွက်မှာ အာရှမှာ ပထမနဲ့ ကမ္ဘာမှာ ပဉ္စမ နေရာကို ရောက်လာနိုင်ပါ တယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက တရုတ်ဈေးကွက်ကို စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ စည်းမျဉ်း ဥပဒေတင်းကျပ် မှုတွေရှိနေပေမဲ့ SNL Kagan ကုမ္ပဏီက တရုတ် ဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ " တရုတ်ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ အကန့် အသတ်တွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကွက်ကအကျယ်ကြီးရှိနေပြီး စီးပွားရေး အရလည်း အင်အားတောင့်နေပါတယ်။ လူတွေကချမ်းသာလာပြီး သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင် ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားလာတာဖြစ်တယ်လို့" Liberty Global ဥက္ကဌ ဂရေဟမ်ဟောလစ်က ပြောပါတယ်။ Source. CNA
ယခုလအတွင်းမှာ စမတ်ဖုန်းသစ်များ တောင်ကိုရီးယားဈေးကွက်ထဲသို့ လှိမ့်ဝင်
iPhone 4S အပါအဝင် စမတ်ဖုန်းသစ်တွေ ယခုလ အတွင်း တောင်ကိုးရီးယားဈေးကွက်ထဲကို စုပြုံဝင် ရောက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုရီးယားမှာ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက် တိုက်ပွဲ နောက်တစ်ကျော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလား အလာရှိ နေပါတယ်။SK Telecom နဲ့ KT Corp တို့လိုမိုဘိုင်း ကယ်ရီယာတွေက အက်ပဲရဲ့အသစ်လွင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ iPhone 4S ကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ဖြန့်ချိဖို့အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ။SKT နဲ့ KT ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုစလုံးက အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအမံတွေအသင့် ဆောင်ရွက် ထားပြီးနေပြီလို့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းရပ်ကွက်မှ သိရပါတယ်။ iPhone ကို တောင်ကိုရီးယားမှာ ပထမဆုံးဖြန့်ချိ စဉ်က KT က တစ်ဦးတည်း Service Provider ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် SKT ကို အခကြေးငွေပေးပြီးသုံးနေသူ တွေက iPhoneကို သုံးနိုင်ဖို့အတွက် KT ကို ရွေးချယ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ iPhone အပြင် စမတ်ဖုန်းအဖြစ် အသွင် ပြောင်းထားတဲ့ အယ်လ်ဂျီအီလက်ထရွန်း နစ်ရဲ့ ပရာဒါဖုန်းနဲ့ SKT ရော KT ပါ ဖြန့်ချိနေတဲ့ ဆမ်းဆောင်း အီလက်ထရွန်းနစ်ရဲ့ Galaxy Nexus တို့ကလည်း ယခု လအတွင်းမှာ ဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်အောင် အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးပမ်းကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ရင် 36 နဲ့ 46 ကွန်ရက်တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ် ၁၂ မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ ဒီအထဲမှာ Nokia Lumia 710 မိုက်ကရိုဆော့ရဲ့ နောက်ဆုံးမိုဒယ် Windows 7.5 Mango တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Source. koreaherald.com.
တိုယိုတာက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မျိုးစပ်ယာဉ်များ ထုတ်လုပ်မည်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကားများအတွက် ဈေးကွက်အလားအလာရှိတဲ့ ဈေးကွက် ကို ရနိုင်ဖို့အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ မျိုးစပ်ယာဉ်တွေနဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ် မယ်လို့ တိုယိုတာမော်တာကော်ပိုရေးရှင်းက အောက်တိုဘာ တတိယရက်သတ္တပတ်အကုန်က ကြေညာပါတယ်။ " တရုတ်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ မျိုးစပ်ယာဉ်တွေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တိုယိုတာနဲ့တရုတ်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွေက တစ်ဆင့် စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားပါမယ် "လို့ တိုယိုတာ ဥက္ကဌ အာကီအိုတိုယိုတာက ပြောပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်းအနီးရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ ချန်ရှုးမှာ တိုယိုတာ က လုံးဝပိုင်ဆိုင်တဲ့ သုတေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုစင်တာကို တည် ဆောက်ဖို့အုတ်မြစ်ချတဲ့ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားမှာ တိုယို တာက ယခုလိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota Motor Egineering & Manufacturing Co,Ltd. တိုယိုတာ အုပ်စုရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ သုတေသနစင်တာများ အနက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဧရိယာဟာအကျယ် အဝန်း စတုရန်း မီတာ ၂ ဒသမ ၃ သန်းရှိပြီး စုစုပေါင်းကုန်ကျ စရိတ်ဒေါ်လာ ၆၈၉ သန်း ရှိပါတယ်။ စင်တာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်တာရဲ့အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန် က မျိုးစပ်ယာဉ်တွေနဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကို တရုတ်မှာထုတ်လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းမှု တိုယိုတာရဲ့ နည်းပညာတွေကို တရုတ် ပြည်မှာ ထုတ်လုပ်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ အတွက် သုတေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုစင်တာကို အကောင်းဆုံးအသုံးချသွားမယ် လို့ တိုယိုတာက ပြောပါတယ်။ Source. China Daily
လျှပ်စစ်ကား BYD e6ကို တရုတ်နိုင်ငံက အများပြည်သူတွက် ဖြန့်ချိမည်
တရုတ်မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ BYD ကို ထင်ရှားတဲ့ အမေရိကန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဝါရင်းဘူးဖက်က ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကိုသာအပြည့်အ၀ သုံးထားတဲ့ကားကို ပုဂ္ဂလိကဝယ်ယူ လိုသူတို့အတွက် ဖြန့်ချိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။BYD e6 ကို မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အခြေစိုက်ရာ ရှန်ဇင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်က စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ တစ်စီးကို ယွမ် ၃၀၀၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၄၆၈၀၀ ) နဲ့ ရောင်းချတယ်လို့ ရှင်ဝှာသတင်းဌာန က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ လူငါးယောက်စီးကားကို 75 KW မော်တာတပ်ထားတယ်။ အိုင်ယွန်းဘက်ထရီ ကို သုံးတယ်။ တစ်ခါ ဘက်ထရီသွင်းထားရင် မြို့ပေါ်မှာ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ဝန်းကျင် မောင်းလို့ရတယ်လို့ BYD ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယာဉ်ကို အပြည့် အဝအားသွင်းဖို့အတွက် မိနစ် ၄၀ ကြာပါတယ်။ ကားရဲ့အမြန်ဆုံးနှုန်းက တစ်နာရီကို ကီလိုမီတာ ၁၄၀ ရှိတယ်လို့ ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။BYD e6 လျှပ်စစ်ကားက သာမန်ဓာတ်အားသုံးကားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် စွမ်းအင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ် ၇၅ ရာခိုင် နှုန်းလောက် သက်သာတယ်လို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ လီယန်ယူဘိုက ပြောပါတယ်။ ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်တဲ့ ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူ BYD Co, Ltd. က BYD Auto ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ စီးရေ ၇၀၀ ၀၀၀ လောက်ထုတ်လုပ်မယ်၊ စီးရေ ၅၁၉၈၀၀ ရောင်းချမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Source. economictimes.indiatimes.com
အမေရိကန်ပညာရှင်နှစ်ဦး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုရရှိ
အမေရိကန်စီးပွားရေးပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ခရစ်တိုဖာဆင်းနဲ့ သောမတ်ဆာဂျင့်တို့ နှစ်ဦးက ယခုနှစ်အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကို ရရှိကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရရှိတဲ့ သုတေသနစာတမ်းက ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းအတွက် အဖြေများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာမှာ ဗဟိုဘဏ် လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ မူဝါဒရေးဆွဲသူများအတွက် လမ်းညွှန်သဖွယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆုရရှိသူအမေရိကန် နှစ်ဦးက အသက် ၆၈ ရှိကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ အစိုးရမူဝါဒတွေအကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနဲ့ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် သူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် သူတို့နှစ်ဦးအား နိုဘယ်ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းကပရင့်စတန်တက္ကသိုလ်ကဖြစ်ပြီး ဆာဂျင့်က နယူးယောက်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခနဲ့ ပရင့်စတန် တက္ကသိုလ် ရဲ့ ဧည့်ပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ နိုဘယ်ဆုရ စီးပွားရေး ပညာရှင်နှစ်ဦးကသူတို့သုတေသနလုပ်ငန်း အတော်များများကို သီးခြားစီနှစ်ပေါင်း များ စွာ ပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အတိုးနှုန်းတွေနဲ့ အခွန်ကောက် တွေပြောင်းလဲမှုက စီးပွားရေးကြီးထွားမှုနဲ့ ငွေကြေးဖောင်း ပွမှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဆန်းစစ်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်း တွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ (နှစ်ဦးစလုံး)ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းထွက်ဖြစ် တဲ့ ဆာဂျင်နဲ့ဆင်းတို့ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်း က မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုက ၁၈၅၉ ခုနှစ် နိုဘယ်ရဲ့ သေတမ်းစာအရ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဆုထဲမှာ ပါဝင် ခြင်း မရှိပါဘူး။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ရောက်မှ ဆွီဒင် ဗဟိုဘဏ်က ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Source.AFP